नेपाली काँग्रेसको लागि खुसीको खबर, ठुलै बमपर उपहार प्राप्त - Muldhar Post
नेपाली काँग्रेसको लागि खुसीको खबर, ठुलै बमपर उपहार प्राप्त
मूलधार सम्वादाता २०७४, २५ कार्तिक शनिबार 797 पटक हेरिएको
ललितपुर- ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ गोदावरी नगरपालिका वडा न. २ बडिखेलमा भएको चुनावी कार्यक्रममा वडा अध्यक्षमा उठेका राप्रपाका उम्मेदवार लक्ष्मण विष्टसहित २५ जना युवा नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् ।
राप्रपामा रहेर लामो समयसम्म राजनीति गर्दै आएका विष्टले आजकै दिनबाट आफु वास्तविक लोकतान्त्रिक र विकास प्रेमी पार्टी नेपाली कांग्रेस भएकोले कांग्रेसमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेका छन् । श्याम विष्ट र राम विष्टको नेतृत्वमा उनी लगायत एमाले,माओवादी केन्द्र परित्याग गरी २५ जना कांग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी ललितपुर क्षेत्र न. १ प्रदेश सभा (क) का उम्मेदवार ऋषिराम घिमिरेले नव प्रवेशीहरुलाई टिका र खादा लगाएर स्वागत गरेका छन् । पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उम्मेदवार घिमिरेले मुलुकमा नयाँ संविधान आईसकेको र अब आर्थिक उन्नतिका लागि नेपाली कांग्रेसलाई विजयी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै घिमिरेले सबै क्षेत्रका जनतालाई मिलाएर देशको निकास र विकास कांग्रेसले मात्र गर्न सक्ने बताउँदै नेपाली कांग्रेस हरेकपल जनताको साथमा रहेको बताए ।
कार्यक्रममा महाधिवेशन प्रतिनीधि खोम प्रसाद घिमिरे ,जिल्ला सदस्य ऋषिदेव फँुयाल ,क्षेत्रिय सचिव सुन्दर मान थिङ तामाङ्ग लगायत कांग्रेस नेता कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिती रहेको थियो ।
उक्त कार्यक्रमको संयोजन तथा सहजिकरण गादावरी न.पा. २ वडा अध्यक्षका उम्मेदवार मनोहर सिल्वालले गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्ने नव प्रवेशीहरुको नामावली